Headline / Report
The following figures are part of the key findings from Athan’s forthcoming report “Freedom of Expression in Four Years under...
စိုးဇံအောင် နိရဥ္စရာ ၊ ဒီဇင်ဘာ၂၁ / ၂၀၁၉ ၆ လအကြာ အင်တာနက်လိုင်းဖြတ် တောက်ခံထားရသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြို့နယ် ၄ ခုကို အင်တာနက် လိုင်းပြန်ဖွင့် ပေးရန်အတွက် ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှု တစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့၌...
Headline / Statements
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှုသည် ယနေ့အချိန်တွင် ၆ လကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ အရှည်ကြာဆုံး ဖြတ်တောက်မှုများတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်လာနေပြီ ဖြစ်ရာ ကျွန်ုပ်တို့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့် အင်တာနက်အရေး လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးချင်းစီက အစိုးရ၏ ဆက်လက် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုကို ရှုံ့ချကြောင်း...
သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေပြီဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (MNHRC) အဖွဲ့ဝင် များကို အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ပြီး MNHRC ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင်လည်း ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိရှိ ဆောင်ရွက်သွားရန် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ...
Headline / Statements / The Number of Journalists Prosecuted or Sued
The Number of Journalists Charged Under the NLD Government
June 15th, 2019 Athan, Freedom of Expression Activist Organization found that there are 52 journalists who have faced trails and...
Headline / The Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law
Assembly Lawsuits under NLD Government
Prosecutions under “The Law relating to Peaceful Assembly and Peaceful Procession” under Current Government by September 28, 2019.
Mid-Year Report published In September 2019, Athan releasedamid-year report on the status of freedom of expression. It covers...
Headline / Statements / The Telecommunications Law
Number of Cases under the Telecommunications Law Rise to 210
According to the findings of Athan – Freedom of Expression Activist Organization by September 17th, there are totally 210 formal...
ကချင်ပြည်နယ်က လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရရှိရေး ဆန္ဒပြပွဲ
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရရှိရေး ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲကို အသံအဖွဲ့၊ SYCB၊ The Wings Institute၊ Nyan Lynn Thit Analytica၊ Youth for New...
Athan © 2020. All Rights Reserved.